Ugbo ahihia | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Ugbo ahihia
Nchịkọta anụ, jiri Roundup mee ihe
Ahịhịa na-ewetara ndị na-elekọta ubi na ndị na-elekọta ugbo ọtụtụ nsogbu, karịsịa ma ọ bụrụ na anyị anaghị ata ahịhịa. Ọ bụrụ na saịtị ma ọ bụ akụkụ nke ala a na-ata ahịhịa, mgbe ahụ, ị ​​gaghị eme ya n'enweghị kemịkal. Ajuju a bilitere: otu esi emeso ubi ahu site na ahihia? E nwere ọtụtụ ndị na-eme ka mmadụ nweta ọgwụ ọkụ na ahịhịa.
Ntuziaka maka ojiji nke "Taịtọs"
Kwa afọ na mbido nke oge ịkọ ihe, isiokwu nke herbicides ugboro ugboro enwetaghachiri mkpa. Njikwa ahịhịa na-aga nke ọma bụ nkwa nke owuwe ihe ubi bara ọgaranya ma dị elu. N'isiokwu a, anyị ga-eleba anya na njirimara nke "Taịtọs," ya na ngwa ngwa ya, ntụziaka maka ịkwadebe ngwakọta ọrụ, na nchekwa nchekwa n'oge nhazi.
"Lontrel-300": ntụziaka maka iji ọgwụ
Nchịkwa anụ bụ usoro dị oké mkpa na nke siri ike. Udị na oke nke ihe ubi ahụ na-adabere na ọganihu ya. N'isiokwu a, anyị ga-atụle otu n'ime ọgwụ ndị kasị dị irè maka mbibi nke ata - osisi "Lontrel" na ntuziaka maka iji ya. "Lontrel-300" ọdọ mmiri: ihe mwepụ ọrụ na ntọhapụ Ụdị ihe mpempe akwụkwọ na-arụ ọrụ nke "Lontrel 300" bụ nke na-adịghị ahụkebe.
Esi eji "Agrokiller" wepu ata
Njikwa ahihia na-anapụta onye ọ bụla oge okpomọkụ. Ị nwere ike ịlụ ọgụ na aka gị, na-etinye oge na ike gị niile na ya. Ma sayensị nke oge a na-etolite ma na-enye aka n'ime ka ọrụ a dị mfe. Ya mere, e kere osisi ọgwụ ndị na-ebibi ahịhịa na-adịghị mkpa. Nkọwa nke Herbicide ọgwụ "Agrokiller" - ọgwụ maka mbibi nke ọka ọṅụṅụ ma na-eri nri kwa afọ na perennial, nakwa osisi shrub na ahịhịa osisi n'oge uto.
Otu esi eji "Zenkor" osisi ahihia iji merie ata ohia
Kwa afọ, ndị na-elekọta ubi na ndị na-elekọta ubi na-ezute n'eziokwu bụ na, na mpaghara ndị ọzọ karịa ihe ọkụkụ ha kụrụ, ụdị ahịhịa niile na-amalite ịmalite, na-eri nri sitere na osisi ndị a kụrụ. Maka ndu ahihia, a na-emepụta ihe ọkụkụ, otu n'ime ha - a ga-atụle "Zenkor" ọgwụ - a ga-atụle n'isiokwu a.
Otu esi etinye "Stomp" ahihia na agha megide ahihia
Na-enweghị ọgwụ osisi, ọ na-esiri ike icheta ọrụ ugbo nke oge a. A na-eji ha ebibi ata. Otu n'ime ha, nke na-ewu ewu na ndị ọrụ ugbo, bụ ọgwụ "Stomp" - osisi ọgwụ dị irè nke na-ebibi afọ iri na ụyọkọ ọka na mkpụrụ ọka n'ubi nke ọtụtụ ihe ubi.
Etu esi eji "Prima" mee ihe: ntuziaka maka iji ọgwụ
"Prima" nke ahihia - ụzọ dị irè na ụzọ dị irè maka nchebe nke ihe ọkụkụ sitere na ụdị iri abụọ na iri nke ahịhịa nke ezinụlọ nke Dicots kwa afọ na afọ abụọ. A na eji ya n'ubi ndị a: wheat, rye, barley, millet, sorghum, ọka. Ụdị nkwụsị na nkọwa nke herbicide Dị na ụdị nke a concentrated concentrated emulsion ke containers nke 5 lita.
Otu esi emeso ọka na ahihia
Ọka bụ ihe ọkụkụ na-achọkarị na ndị ọrụ ugbo ụlọ. Otu ihe dị mkpa na-emepụta ya bụ nchebe megide ngbochi ihe ọkụkụ. Azịza nke a nwere ike nyochaa iji ogwu. Ụkpụrụ ndị bụ isi nke na-akọ ọka na-emepụta ọka wit na-eto eto na-achọ ọnọdụ dị otú ahụ: okpomọkụ 12-25 ° C; ihu mmiri na-erughị pasent 30; ala pH 5.
"Egwuregwu" "ahịhịa": esi eji ngwá ọrụ maka nchịkwa ahịhịa
Kwa afọ, ndị na-elekọta ubi na ndị na-elekọta ubi na-agbasi mbọ ike na ata. Usoro a na - ewe ọtụtụ oge na mgbalị. Ma, taa, karia ma mgbe mgbe, a na-eji ndokwa pụrụ iche mee ihe megide ata ah u, nke mere ka o kwe omume ngwa ngwa ma kpochapu oke nke oke ohia. Otu n'ime ụzọ dị irè na ọgụ a bụ ọgwụ "Tornado".
Fabian "ahịhịa": nkọwa, usoro eji, ọnụego oriri
A na-eji kemịkị dị iche iche chebe mkpụrụ osisi soybean site na ahịhịa. Otu n'ime ebe a na-emekarị bụ "Fabian" herbicide. Anyị na-atụ aro ịghọtakwu nkọwa ya, iji nyochaa ụkpụrụ omume na irè. Ihe mejupụtara na-arụsi ọrụ ike ma wepụ akwụkwọ A na-enye ọgwụ ahụ n'ụdị granulu a na-achụsasị na mmiri.